EVY's Kitchen: Nutella ရေခဲချောင်း
ကလေးတွေနှစ်သက်မယ့် အစားအသောက်တစ်မျိုးနော်။ လုပ်ရတာလဲ လွယ်ပြီး သုံးတဲ့ ပစ္စည်းကလည်း သုံးမျိုးထည်းရယ်။ ခုနောက်ပိုင်း Food Magazine မှာ ကလေးအစီစဉ်အတွက်လဲ ရေးနေတော့ ကလေးတွေကြိုက်မယ့် အစားသောက်မျိုးလည်း စဉ်းစားရတယ်။ ခက်လဲ သိပ်မခက်တဲ့ ဒီရေခဲချောင်းလေးကိုတော့ ကလေးရော လူကြီးပါနှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်
Nutella ချောကလက်ယို - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်းမောက်မောက်
နွားနို့ ၁၂၀ ဂရမ်
နို့စိမ်း ၁၂၀ ဂရမ်
လုပ်နည်းကတော့ ရေးနေရင်တောင် ကြာနေဦးမယ်နော်။ ပုံကြည့်တာနဲ့တင်သိနိုင်ပါတယ် :D. ။ အားလုံးကို blender နဲ့ရောမွှေ။ Blender အဆင်မပြေရင် အလုံပိတ်ဗူးတစ်ခုမှာ ထည့်ပြီး အားပြင်းပြင်းနဲ့ လှုပ်ပေးရင်လဲရတာပဲ။ ရလာတဲ့ ချောကလက် milkshake လိုမျိုးကို ရေခဲချောင်းထည့်တဲ့ ခွက်လေးထဲထည့်။ ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ထပ်မှာ ၁ ညသိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ ရေခဲချောင်းကို ခွက်ထဲကထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ရေနွေးနွေးလေးကို နဲနဲလောင်းပေးပြီးမှ ထုတ်ရင်ပိုလွယ်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ကြပါဦး။ အိမ်မှာတော့ ကလေးရော လူကြီးပါ နှစ်သက်ကြပါတယ်
If you love "Nutella", you will love these too...The recipe is extremely easy and everyone could do it without using any fancy equipment. I found the recipe on the Internet and made some changes cos I want to use up my leftover evaporated milk.
Evaporated Milk 120ml
Full cream Milk 120 ml
2 heap table spoon of Nutella
Just blend them all in blender and pour into the mold and freeze them overnight. Serve it on the next day.
Note: pour luke warm water over the mold so that you could unmold the Nutella ice pops easily.
Posted by Evy at 10:33 AM
Evy yay.. A Ma lae thar gyiatwat lote pay kyi ohan mal ... Kyae zuu
mmmm... look so good! Can you please translate?
ရန်ကုန်ရောက်ရင် စီးပွားဖြစ်လုပ်ဘို့ ပစ္စည်းလေးတွေ အခုထဲကစုထားနော်း)
Thanks Ann, I will post it in English very shortly :)
မိုးနတ်လဲ အိမ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်စားကြည့်အုံးမယ်..
ဒါပေမဲ့ ပျင်းတယ်ကွာ..မလုပ်ပြီးသားပဲ အ၀အပြဲ
စားသွားပြီနော်...အမ်.ဒန် ဒန့် ဒမ်.....:)
သားလေးကို လုပ်ကျွေးမယ်လို့ ပြောထားတယ်... ကျေးဇူး ညီမ...